कलाकार कमलमणी नेपालको चिया चौतारी देखि रंगमञ्च सम्मको यात्रा - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
प्रियंकाको ड्रेस अदितीको ज्यानमा !
‘मंगलम’मा ‘बम्पर उपहार’
Banner Newsअफ गफ
२६ पुष २०७४, बुधबार १९:०१
नेपाली टेलिसिरीयल भद्रगोलमा ‘के त भन्दा खेरी आखिरमा होन्त’ भन्ने डाइलग र खुपीका बा भनेर चिनीएका हास्य कलाकार कमलमणी नेपाल कुनै समय रेडियो अडियोका कार्यक्रम प्रस्तोता थिए । त्यतिबेलाको आफ्नो पात्र र प्रस्तुतीलाई फर्केर हेर्दा कस्तो लाग्छ त नेपाललाई अनि रंगमञ्चको यात्रा कसरी तय भयो ? प्रस्तुत छ उनकै लयमा ।
रेडियो अडियोको चिया चौतारी कार्यक्रममा मलाई सबैले घोडा दाई घोडा भनेर बोलाउने गर्थे । चिया चौतारी भनेको गाँउ घरको चिया खाने ठाँउ जस्तो हो । त्यहाँ आएर चिया खानेहरु जस्तो हुन्छन हामी रेडियो कार्यक्रममा पनि त्यी नै क्यारेक्टलाई प्रस्तुत गर्न खोजेको थियौ । तर, त्यसमा आफू धेरै बोलेर अरुलाई बोल्न नदिने हो । त्यो भएको कारणले सबैले धोडा दाई घोडा दाई भन्ने गर्थे । त्यो पात्र त्यसरी जन्मिएको हो । म हिमालयन टेलिभिजनमा पनि काम गरेँ । मैले लौरोले धेरै चोटी धमलालाई हमला गरेको छु ।
रेडियोको नाटकमा पनि निरन्तर रुपमा काम गरिरहेको छु । रेडियो कार्यक्रममा निकै रमाईलो हुन्छ । हामीले चिया चौतारीमा स्क्रिप्ट बिना नै काम शुरु गरेको हौ । यहाँ काम गरेर एक किसिमको अनुभव भयो । पछिपछि रेडियोमा काम गर्दा स्क्रिप्ट हाम्रो हातमा आउँदा भने हामीलाई केही फरक पर्दैन रहेछ । स्क्रिप्ट भयो भने त्यहाँ भएको कुरालाई झन खेलाएर भन्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । कुनै समयमा भने शब्दलाई लिएर सचेत भईन्छ । त्यो कुरालाई एकचोटी स्क्रिप्ट पढ्यो भने मिलाउन भने पक्कै सकिन्छ । कुनै समय थियो जब कुनै काम नभएर रेडियो अडियो आएर खाजा खाएर गईन्थ्यो ।
अहिले कलाकार भएको छु । कलाकार हुुुनु फाईदै हो जस्तो लाग्छ किनभने सबैले चिन्छन माया गर्छन राम्रो भन्छन । केही समयमा दुख पनि थियो नभएको भने होईन । घर परिवारबाट शुरु शुरुमा त नटुवा भईस पनि भन्थेँ । त कलाकार भईस अरे तेरो त टेलिभिजनमा पनि आउँदैन खै तेरो अभिनय देखान भन्ने खालको कुरा पनि आउँथ्यो । उहाँको कुराले चित्त पनि दुख्थ्यो ।
म यो क्षेत्रमा रङ्गमञ्च हुदै आएको हो । मैले बाह्र तेह्र वर्ष त स्टेजमा नै बिताए । म गाँउबाट यहाँ नाटक खेल्छु सिनेमामा काम गर्छुे भनेर आएको भने होईन । म कम्प्यूटर सिक्न भनेर छिरेको हो । तर त्यो बिचमा जयुतु संस्कृतमको आन्दोलनको स्वर्ण महोत्सव हुने रहेछ नाचघरमा । म गाउँघर मै बेलाबखतमा क्यारिकेचर गर्ने गर्थे । धेरैले क्यारिकेचर गर्न लाँउथे । त्यो नाटकमा चाहि तराई वासीको झै बोल्ने गर्थे । त्यहाँ मलाई क्यारिकेचर गर्ने अवसर प्राप्त भयो । त्यसपछि मैले स्विकार गरेँ ।
त्यसपछि म वाल्मिकी क्याम्पस गए र त्यहाँ म जस्तो धेरैले नाटक सिकिरहनुभएको थियो । मैले मधेसी नेताको क्यारिकेचर गरेँ । त्यसपछि मैले शो पनि गरे र मलाई त्यो बेलाको प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोईराला ज्यूले एउटा प्रमाण पत्र दिनुभएको थियो । त्यो अहिले पनि मै संग छ । त्यही नाटकको पेरीफेरीमा जो जो हुनुहुन्थ्यो त्यी साथीहरुले मलाई नाचघरमा एक्टिङ्गको फर्म खुलयो भने फर्म भर्न भने । त्यसपछि मैले नाटककोे बाटो समातेँ ।
‘पिंजडा ब्याक अगेन’को जापान प्रदर्शन तय
आजको सिनेमा ‘बाटो मुनिको फूल’
अहिले सम्मकै महंगोमा बिक्यो ‘शत्रु गते’ओभरसिज राइट
आजको सिनेमा ‘झोला’
यस वर्षको एनएफ डिसी अवार्ड अभिनेत्री प्रियंका कार्कीका लागि विशेष रहन गयो । किनभने यहि अवार्डमा प्रेमी आयुष्मान…